မြန်မာအိုင်စီတီဂျာနယ်အဖြစ် ၂၀၁၃ မှာ စတင်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည်များကို အပတ်စဥ် ရေးသားပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အသင်းသား ၃ ယောက်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး လပိုင်းအတွင်းမှာတင် အယောက် ၃၀ကျော်အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာများအပြင် ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ချိရေးပါ လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းမှာ စာဖတ်သူများလာသည့်အလျောက် www.myanmarict.com အမည်ရသည့် အွန်လိုင်းသတင်းဝက်ဆိုဒ်ကိုလည်း အောင်မြင်စွာ လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar ICT Journal was born in 2013 as weekly journal publications focused on news and development of Information and Communications Technology in Myanmar. Started with three (3) team members and published thousands weekly. Afteracouple of months, ICT journal built over 30 strong team members filled with editors, content writers and its own distributions channels. Due to the strong demand for an online readership, the journal quickly set up an excellent online news website at www.myanmarict.com.
နည်းပညာဟာ လူတွေရဲ့ အကျင့်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်စေတဲ့အလျောက် မြန်မာအိုင်စီတီဂျာနယ်သည်လည်း လူအများဖတ်ရှုလေ့လာသည့် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများရှိရာ ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဒါတွေတင်မကပဲ မြန်မာအိုင်စီတီအဖွဲ့သားများမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေစီးကြောင်း ပြောင်းရွှေ့မှုပေါ်မူတည်ပြီး အွန်လိုင်းရှော့ပင် ဝက်ဆိုဒ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။
As technology transforms people’s habits, Myanmar ICT journal quickly adapts the trend as one of the best-read online news websites in Myanmar for tech-related news, reviews and articles. Furthermore, the team at Myanmar ICT focuses on developing the next direction in 2015. Online Shopping.
မြန်မာအိုင်စီတီအဖွဲ့သားများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ပိုမိုကောင်းမွန်လွယ်ကူတဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်မှုကို ထွန်းကားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာ ဒီဇိုင်းနာ၊ ဒီဗလုပ်ပါများဖြင့် အွန်လိုင်းစတိုးကို စတင်တည်ဆောက်ကြပါသည်။ ၂ နှစ်ကျော် ကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာ ခရတ်ဒစ်ကတ်ဖြင့် အွန်လိုင်းမှာ ချက်ချင်းပေးချေနိုင်ပြီး ပို့ဆောင်မှု ပုံစံမျိုးစုံံပါဝင်တဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်အထိ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။
The team at Myanmar ICT want to giveabetter online shopping experience to people in Myanmar and started building an online platform with Myanmar Developers and Designers. Yes, it takes more than two years, but asaresult, the team comes up withareal live credit card transaction with proper calculation on delivery withavariety of delivery options.
မြန်မာပြည်တွင်းသာ ရောင်းချသည့်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်အောင် ဝင်ရောက်ဝယ်ယူရမည့် ဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာကိုလည်း ICT.com.mm အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ICT.com.mm သည် လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးပြုလို့ရသည့် နည်းပညာအစုံကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် ဝယ်ယူသူများ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Trying to simplify the user experience on shopping ICT products online, the Myanmar ICT team rename website address to ICT.com.mm. ICT.com.mm use all standard technology available right now in the world, and the team make sure users feel safe, secure, and effortless to check things out as well.
အိုင်စီတီမှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကတည်းက အိုင်စီတီ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့သို့ အိုင်စီတီ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ပံ့ပိုးမှုများကြောင့်လည်း အိုင်စီတီမှ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများသည် အသစ်၊ အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်လာသည့်အတွက်ကြောင့် ဤနည်းပညာကို ဇောင်းပေးထားသည့် အွန်လိုင်းစတိုးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အစဥ်ကြိုးစားနေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Moreover, the ICT.com.mm management team builtastrong relationship with all retailers and distributor in the ICT industry since 2002. Thus, with the support of all parties, ICT.com.mm can guarantee their products will be genuine, and their services will be second to none in Myanmar online marketplace.
ICT.com.mm ကို ကနဦးအနေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရှေးဦးစွာ လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံံပါတ် ၁ အိုင်စီတီ အွန်လိုင်းစတိုးအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိပါသည်။
ICT.com.mm launchedabeta version on February 17, 2018, and it currently is the No. 1 Online Tech Retailer in Myanmar.